ONYE NA-EDEBE ỤLỌ NA-EDEBE IHE NKIRI 9.5.3 MAKA N'EFU - MMEMME NYOCHA - 2019
Onye Mgbakwunye Ụlọ 9.5.3
Usoro PayPal dị mfe ma dị mma bụ ndị na-ewu ewu n'etiti ndị na Intaneti bụ ndị na-arụsi ọrụ ike, na-azụta site na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụ na-eji ya maka mkpa ha. Onye obula choro iji uzo a eme ihe n'amaghi mgbe niile. Dịka ọmụmaatụ, otu esi edebanye ma ọ bụ zipu ego nye onye ọrụ PayPal ọzọ.
Hụkwa: Otu esi eji WebMoney
Debanye aha na PayPal
Ọrụ a na-enye gị ohere ịmepụta akaụntụ nkeonwe ma ọ bụ nke ụlọọrụ. Ndebanye aha nke akụkọ ndị a dị iche. Na mkpa onwe gị ịkọwa data paspọọ gị, adreesị na ihe ndị ọzọ. Ma ulo oru choro ihe zuru oke gbasara ulo oru na onye nwe ya. Ya mere, mgbe ị mepụtara obere akpa adịghị echegharị ụdị akụkọ a, n'ihi na e mere ha maka ebumnuche dị iche iche.
Gụkwuo: Deba aha na PayPal
Anyị mara nọmba akaụntụ PayPal
Nọmba akaụntụ ahụ dị na ọrụ niile yiri ya, mana na PayPal ọ bụghị setịpụ nọmba dika, dịka ọmụmaatụ, WebMoney. Mgbe ị debanyere aha, ị na-ahọrọ nọmba nke gị site n'ịkọwa email nke akaụntụ gị na-adabere na mbụ.
Gụkwuo: Ịchọta nọmba PayPal Account
Ịnyefe ego gaa na akaụntụ PayPal ọzọ
Ị nwere ike ịnyefe ego gị na PayPal e-akpa. A na-eme nke a n'ụzọ dị mfe, ọ dị mkpa ka ị mara adreesị ozi-e nke onye ọzọ nke ejiri ya na akpa ya. Mana cheta na ọ bụrụ na i zipụ ego, usoro ahụ ga-ebute gị ọrụ, ya mere, akaụntụ ahụ kwesịrị ịdị ntakịrị karịa ịchọrọ iziga.
Iji nyefee ego, soro ụzọ "Na-eziga ịkwụ ụgwọ" - "Nye ndị enyi na ndị ikwu ego".
Dejupụta ụdị mpempe akwụkwọ ahụ ma kwado ọpụpụ ahụ.
Gụkwuo: Ịnyefe ego site n'otu obere akpa PayPal gaa na ọzọ
Anyị na-ewepu ego na PayPal
E nwere ọtụtụ ụzọ isi kwụpụ ego site na PayPal e-obere akpa. Otu n'ime ha gụnyere ịnyefe na akaụntụ akụ. Ọ bụrụ na usoro a anaghị adị mfe, mgbe ahụ ị nwere ike iji nyefee ọzọ e-obere akpa, dịka ọmụmaatụ, WebMoney.
Iji nyefee ego na akaụntụ akụ, gaa "Akaụntụ" - "Ịkwụpụ ego".
Dejupụta mpaghara niile ma chekwaa.
Gụkwuo: Anyị na-anapụ ego n'aka PayPal
PayPal abụghị ihe siri ike iji mee ka o yie ka ọ na-ele ya anya na mbụ. Mgbe ị debanyere aha, ọ dị mkpa igosi ezigbo data iji zere nsogbu na usoro nke iji ọrụ ahụ. Ịnyefe ego gaa na akaụntụ ọzọ anaghị ewe oge ma rụọ ya n'ọtụtụ nzọụkwụ. Na ịchọta ego nwere ike ime n'ọtụtụ ụzọ.